Warar - Fiberglass Chopped Strands
Fiberglass la jeexay xargaha oo ay ku jiraan Xargaha la jarjaray ee BMC, Xargaha la jarjaray ee loogu talagalay Thermoplastics, Xargaha qoyan oo la jeexjeexay, Xargaha la adkeeyay ee Alkali-adkeysiga ah (ZrO2 14.5% / 16.7%).
1) .Doorashooyin Xirmay BMC
Xadhkaha la jarjaray ee loogu talagalay BMC waxay la jaan qaadayaan polyester aan dhammaystirnayn, cusbi epoxy iyo cusbada phenolic.
Codsiyada dhammaadka isticmaalka waxaa ka mid ah gaadiidka, dhismaha & dhismaha, elektiroonigga & korantada, makaanikada, iyo warshadaha fudud.
2). Xargaha la jarjaray ee loogu talagalay Thermoplastics
Joogtada la jarjaray ee 'Thermoplastic' waxay ku saleysan tahay wakiilka isku xirka silane iyo qaabeynta qiyaasta gaarka ah, oo ku habboon PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP;
Istarooyinka la jarjaray ee loo yaqaan 'E-Glass' oo loo yaqaan 'thermoplastic' ayaa loo yaqaan 'daacadnimada' heerka wanaagsan, qulqulka sare iyo hantida wax soo saarka, oo keenaya qalab farsamo iyo tayo sare leh dusha sare ee alaabteeda la dhammeeyay.
3.) Xarriiqyo Qoyan
Qoyaanka la jarjaray oo qoyan waxay la jaan qaadayaan polyester aan buuxsamayn, epoxy iyo cusbada phenolic iyo gypsum.
Qoyaanka la jarjaray ee qoyan waxay leeyihiin qoyaan dhexdhexaad ah waxayna keenaan qulqulka qulqulka, oo ay ku jiraan u kala firidhnaanta biyaha iyo gypsum.
4.) Xargaha Al-adkaysi u leh ee Go'an (ZrO2 14.5% / 16.7%)
I). Premix Xargaha Al-adkaysi u leh ee la jarjarey – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
Qeybaha la jarjaray ee 'Premix cut' waa nooc alwaax ah oo adag oo u adkaysta muraayadaha fiber galaaska loo isticmaalo guud ahaan loogu talagalay in lagu sii daayo agabyada kale waxaana lagu soo saaraa adeegsiga shubista shaabad ama habab kale oo ku jira qeyb GRC ah
Xitaa xaaladaha ku jira qiyaasta sare sidoo kale waa mid aad u fudud in la dhexgalo, iyo ka dib isku darka koox kooxeed wanaagsan. Soosaarida qaybaha caadiga ah ee GRC sida tuubooyinka biyaha ama sanduuqyada qalabka, ama dhismooyinka dhismayaasha sida looxyada kala qaybsan ee miisaanka yar, nuxurka zirconia ee 16.7% qaybaha waxsoosaarka dunta la jarjaray ee awoodda dambe ee waxqabadka si ka wanaagsan
II). TEX yar Xargaha Al-adkaysi u leh ee la jarjarey – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
Qeybaha la jarjaray ee Tex waa Intergrity sare, tex yar, alkali u adkaysta, dhalo-fiber la jarjarey oo loogu talagalay sameynta qaybaha GRC ee nidaamyada isku dhafka qallalan ama habab kale oo horudhac ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa soo saarista qaybaha horay loo soo saaray ee qaybaha caadiga ah ee GRC.
Nidaamka wakiilka qoynta ee sida gaarka ah loo qaabeeyey ayaa sahlaya in la isku daro oo la ilaaliyo sharafta wanaagsan inta lagu guda jiro isku darka, si wax ku ool ah looga hortago xirashada iyo dayactirka aaladaha marka la isku daro waxyaabaha qalalan. Fiilooyinka leh cufnaanta hoose ee hal-xarig ah waxay kordhin kartaa aagagga gaarka ah ee kaqeybgalka hooseeya, sidaas darteedna waxay soo saartaa saameyn xoog leh Badeecaddu waxay si gaar ah ugu habboon tahay diyaarinta madaafiic horay loo sameeyay iyo isku darka rinjiga.
III). Biyo kala firdhay Xargaha Al-adkaysi u leh ee la jarjarey – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
biyaha firidhsan qaybaha kala jaban ayaa ah ujeedo gaar ah oo la jarjaray xarig fiber fiber dhalo u adkaysta, oo loo isticmaalo isku darka sibidhka iyo walxaha kale ee u baahan faafitaanka sare. Gaar ahaan dhoobada qaaska ah ee dhoobada ah ee lebbiska ama dheecaanka hoobiye iyo waxsoosaarka kale ee warshadaha.
Nidaamka wakiilka qiyaasta sheyga waa biyo-firdhin kara, markii lagu qaso biyo, waxaa si ku filan loogu kala firdhin karaa hal-adeygyada. Waxaa loo adeegsaday rinjiyeynta iyo isku dhafka dayactirka ee la taaban karo, iyo iyada oo loo marayo nidaam gaar ah si loo soo saaro qaybo heer GRC caadi ah.